Momba anay - Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
dia naorina tamin'ny 2010, mifantoka amin'ny "teknolojia famahanana manan-tsaina" & "sehatra pirinty manan-tsaina" fikarohana & fampandrosoana sy fanamboarana. Izahay dia nifikitra tamin'ny filozofia "fandrosoana & fiaraha-miasa, fandresena fandresena ho an'ny ho avy", manatanteraka hatrany ny "fanavaozana miankina amin'ny tena, mitarika teknolojia famahanana manan-tsaina" tetikady fampandrosoana, mitandrema ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fironana amin'ny tsena, mamaky hatrany lamina indostrialy. Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana famahanana manan-tsaina an'ny BY, ny rafitra ary ny vahaolana amin'ny sehatra dia nampiharina tany Amerika, Alemana, Italia, Korea, India, Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapore sns. Manana sampana any atsimo atsinanan'i Azia, Amerika Avaratra ary koa izahay Eoropa amin'ny varotra sy serivisy.
"Fanavaozana & fampandrosoana" no lohahevitr'i BY tsy tapaka.
Ny fahaizan'ny fanavaozana ara-teknika matanjaka dia loharanon'ny fampandrosoana maharitra an'i BY. Manana zava-bita lehibe ny fanavaozana ny teknolojia: manana patantin'ny famoronana sy patantin'ny modely ilaina ary koa ny zon'ny mpamorona ary nanamafy ny haitao-ntsika manokana.
"Fanatsarana mitohy & mihoatra ny tenantsika" no làlan'ny fanavaozana. Manantona amin'ny fomba feno & ampiharo amin'ny fomba henjana ny fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001 ary manangana fenitra fanaraha-maso kalitao henjana. Ny vokatra lehibe dia nandalo ny mari-pahaizana CE. BY dia hanangana ho avy tsara kokoa amin'ny vokatra sy serivisy tsara kokoa.
Manana ny ekipa fikarohana sy fampandrosoana fampandrosoana matanjaka indrindra izahay ary mpiasa ebullient. Izahay dia manao ny ezaka ataonay mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa amin'ny vokatra sy serivisy isan'andro. Matoky izahay: ny fanavaozana ihany, afaka miaro ny sandan'ny marika manokana izahay; fanavaozana ihany, azontsika atao ny mahazo ny fanajan'ireo mpampiasa; fanavaozana ihany, azontsika atao ny mampiseho talenta amin'ny tsena azo ovaina. Paikady ara-barotra matanjaka, hery ara-teknika matanjaka, azontsika atao ny mitazona ny saintsika ary tsara kokoa ny hiverenana amin'ireo mpampiasa antsika ary hihaona amin'ny fanoloran-tena ho an'ny mpiara-miasa stratejika. Hanohy ny fanovana indostrialy izahay, hamorona vanim-potoana vaovao amin'ny faritra fisakafoanana manan-tsaina.
Manohy mandeha amin'ny lalan'ny fanavaozana tsy miankina isika ary manamboatra haavo vaovao.
Mandeha am-pahasahiana ny paikadim-pampandrosoana "rojo indostrialy" isika ary mitondra làlana vaovao;
Antsoinay hoe "indostria Sina 4.0 ho an'ny teknolojia famahanana manan-tsaina", naorina "China Intelligent making".
Noho izany, manao dingana manomboka amin'ny hatsarana ka hatrany amin'ny fialantsasatra miavaka isika.
Anaran'ny orinasa: Guangzhou Baiyi Intelligent Equipment Co., Ltd.
Factory: A7, No. 500 an'ny Guangshan 1st. Rd. Distrikan'i Tianhe, Guangzhou.
Olona mifandray: Ramatoa Easy Ouyang